🥇 ▷ Waxaan la kulannay Longovilo Station iyo taariikhdiisa howlgalka Apollo 11 ✅
Waxaan la kulannay Longovilo Station iyo taariikhdiisa howlgalka Apollo 11
Sannadkii 1969 howlgalka Apollo 11 ayaa la fuliyay, oo uu hogaaminayey Taliye Neil Armstrong, kaasoo taariikhda galay markii ugu horeysay ee qof bini-aadam ah cagta loo saaro dayax gacmeedka Dunida: Dayaxa.
Sanadkaan 50 guuradii ka soo wareegtay howshan, oo si gaar ah loo cayimay, bishii Luulyo 20 ayaa dayaxu soo degay Gorgorka dusha sare ee dayaxa. Sababtaas darteed ayaa ah in lagu casuumay Entel si aan u ogaano Saldhigga Longovilo iyo taariikhdiisa gaarka ah ee ay ku leedahay muhiimaddan.
Longovilo iyo gudbinta rasmiga ah ee dayax soo degga
Taariikhda xaruntan ayaa soo bilaabatay 1968. Sida uu qabo Guillermo Cifuentes, khabiirka dayax-gacmeedka ee Entel, madaxweynaha markaa Eduardo Frei Montalva wuxuu ahaa kan daah-furay taleefishan oo ku yaal meel u dhow magaalada San Pedro, ee Gobolka Magaaladda, kaas oo lahaa saxanka satalaytka 30 mitir, oo si ku-habboon loogu yeedhay Longovilo 1, oo ahaa kii ugu horreeyay noociisa Latin America.
Xaraashkani wuxuu u horseeday guul weyn xagga heerka isgaarsiinta ee dalka, maadaama ay u oggolaatay inuu ku xirmo dayax-gacmeedka aagagga ugu fog ee ka socda dhulka ay ka midka yihiin Punta Arenas ama Villa O’Higgins, waqti aysan sahlaneyn in la baajiyo isgaarsiinta, aad uga yar waddankeena, kaas oo isagu laftiisu ku adkeyd inuu “isku xidho” sababta oo ah goobta juqraafi ahaan.
Sannadka soo socda howlgalka Apollo 11 waa la fulin lahaa, kaas oo lahaan jiray in waqtigaas uu ahaa kacaan: waxaa toos loogu baahin lahaa telefishanka. Si taas loo gaadho, qaar ka mid ah satalaytka ayaa la dejiyey oo hawshoodu ahayd dib-u-qaybin rasmi ah u gudbinta adduunka intiisa kale. Nasiib darro, dayax-gacmeedkii ay lahayd Chili iyo intii kale ee LatAm-gu way fashilmeen.
Si kastaba ha noqotee, Injineerada mas’uulka ka ah idaacada ayaa lahaa fikrad qurux badan: u leexee anteenada Longovilo 1 dayax gacmeedka ku duulaya Badweynta Baasifiga si loogu dhejiyo gudbinta rasmiga ah ee timid Mareykanka. Ayaa leh ereyga ugu dambeeya go’aankan wuxuu ahaa Madaxweyne Frei Montalva laftiisa, oo oggolaaday dhaqdhaqaaqa.
Sidaas daraadeed, Chile wuxuu noqon karaa mid ka mid ah waddamada yar ee adduunka – iyo kan keliya ee ku yaal Latin America – ee ku noolaa dayax gacmeedkii Armstrong oo degay isla markaana leh shirkad toos ah. Dabcan, go’aanka lagu beddelayo booska anteenada waxay leedahay cawaaqib xumo: dhammaan noocyada wicitaanada masaafada dheer ayaa la joojiyay inta lagu gudajiray, maadaama taasi ay ahayd shaqada ugu weyn ee anteenada inta lagu gudajiray waqtiga.
Mauricio Acuña, oo ah horjoogaha Saldhigga Longovilo, wuxuu noo sheegayaa in goobta ay hadda ku taal 8 suxuunta dayax gacmeedka waaweyn iyo labaatan kale oo yaryar, kuwaas oo inta badan ka shaqeeya inay dejinayaan dhammaan noocyada calaamadaha dijitaalka ah.
Anteenooyinka waaween, dhanka kale, waxay leeyihiin adeegyo kaladuwan. Waxay weli fulinayaan howsha haynta goobaha ugu ba’an dalka ee kuxiran dayax-gacmeedka, sidoo kale Rapa Nui, laakiin mararka qaarkood waxay qabtaan howlo aad u adag, sida inaad u leexiso satalaytka orbitalka, haddii la codsado.
Waa in la ogaadaa in 8 ka mid ah anteenooyinka waaweyn, 7 kaliya ay shaqeynayaan. Longovilo 1 waa “hawlgab”, laakiin sida laga soo xigtay Acuña, waa macquul in dib loo howlgeliyo haddii macaamiil uu codsado. Hawshani waxay qaadankartaa waxyar bil in lagaaga tago iyadoo 100% mar kale socota.
Dabcan, hadda ma ahan teleport kaliya ee gobolka – Peru, Argentina iyo Brazil ayaa sidoo kale leh – laakiin xitaa waa mid ka mid ah kuwa ugu da’da weyn adduunka. Tani waa sababta, shaki la’aan, waa meel aad u xiiso badan lafteeda, Taariikhda ka dambaysa, ee laxiriirta gudbinta dayaxa soo degaaya, iyo sidoo kale, howlaha ay maanta ku fuliso isgaarsiinta dalka.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato taariikhda Longovilo iyo gudbinta dayaxa Dayax, waxaan kugula talineynaa inaad aragto bartan in Entel ay u diyaar garowday xuska sanad guuradii dayaxa.